Zoma fahadimy fankalazana ny Paka – Trinitera Malagasy
Asa 15, 22-31/
Md Joany 15, 12-17
Ny Asan’ny Apôstôly dia mampianatra antsika handinika sao sanatria eo anivon’ny Fiangonantsika mbola misy olona tsy nahazo alàlana akory avy tamin’ny Apôstôly mampitabataba amin’ny teniny sy mampitebiteby ny sain’ny mpino, amin’ny fitakiana adidy tsy araka ny Evanjely akory. Mazava moa ny votoatin’ny Taratasy nosoratana ho an’ireo Jentily tany Antiokia, mamintina ny zavatra nolazain’i Piera sy Jakoba: fifadiana ny fijangajangana sy ny fanompoan-tsampy.
Misy fomba fiteny sasantsasany tiako asiana tsindrim-peo kely anefa amin’izay ampiasain’i Lioka amin’ny fitantarany. Ny Fiangonana no mifanara-kevitra fa tsy olona iray, izy no maniraka (izahay), ary miaraka amin’ny Fanahy Masina no ahapahany hevitra. Izay fiaraha-miasa amin’ny Fanahy Masina izay no hahafahana manapa-kevitra araka ny Evanjely, ka hahatonga izany ho loharanon-kafaliana sy fanalana alahelo ho an’izay mino.